Dhawr jeer, waxaad u baahan tahay inaad isku shaandheyn aad file video MP4 si sax ah u arkaysid. Badanaa marka aad diiwaan geliso wixii video aad casriga ah, waxa loo baahan yahay in la geesgees u wareejiyo si sax ah u arkaysid on laptop. Si kastaba ha ahaatee ma aha in aad si hadda ka welwelina qoqobada aad file video MP4 iyadoo ay jiraan tiro ka mid ah barnaamij laga helo suuqa in samayn doonaa wax la mid ah oo aad u. Baakadaha software utility waxaa laga heli karaa muddo ku dhow oo dhan dhufto oo si fudud loo soo bixi karaa internet-ka si loogu isticmaalo dheeraad ah.
Qeybta 1: Waa maxay ugu dhiiran?
Qeybta 2 aad: Sidee ayaad soo dejinta iyo dhoofinta dhiiran Files Sida MP4 Files?
Qeybta 3: Maxaad Ha Videos MP4 Qaar ka dhoofsadaan in Windows Movie abuuray?
Dhiiran urursatay jawaab wayn sida barnaamij caan ah oo il furan luqado badan audio editor oo taariikhqorihii software. In loo isticmaalo in lagu record iyo edit codadka loo isticmaalo ujeeddooyin xirfadeed. Sidoo kale, waxa ay waxa ay awood u helaan saldhig user waaweyn sida ay u shaqayso lacag la'aan ah Windows, Mac OS X, GNU / Linux oo kale oo tiro badan Systems Operating.
Dhiiran jiidanaya tiro balaadhan oo ah dadka isticmaala ay sabab goobaha ay u bixisaa. Iyadoo dhowr ah muuqaalada audio-habaynta iyo duubo oo ka caawisa inay la iyo hawlaha xirfadeed ee caadiga ah. Users si fudud u heli kartaa online Casharrada oo kaa caawin kara inay isticmaalaan barnaamijka hab cusub. Abuuritaanka ringtones, isku daro kuwan raadkaygay rikoodh, cajalado ama diiwaanka gudbaayo desktop ah ama qalab durugsan, ama xataa tageynaa track ah oo wuxuu galay qaybaha kala duwan la sameeyo si fudud la dhiiran. Waratada leeyihiin raaxo in ay gunti dhiiran la saarkooda ama iibiyo ama la qaybiyo dhiiran iyada oo License Guud ee Dadweynaha.
Features ah ugu dhiiran:
Bixiya music duubo multi-track
Podcasting iyo Radio muuqaalada sidoo kale waxaa laga heli karaa in interface
Waxaa loo isticmaalaa si ay u qoraan khudbado, cod ayaaba, iyo qoraalada xisaab hubinta
Waxaa loo isticmaali karaa si ay u qoraan Audio ka codsiyada
Users sidoo kale ka baran karaa luqadaha ajnabiga
Interface A kaamil ah si ay u abuuraan buugaagta Audio
Ku raaxayso la Tracks karaoke Breaking
Kids in la caawiyo oo la wanaajiyey farsamooyinka reading
Dhiiran, inta badan qabka software audio-tafatirka ma taageeri karaan dejinta iyo dhoofinta ee files MP4 laakiin MP3 files. Waayo, kuwa ugu kuwaas oo raadinaya in ay wax ka bedel ay videos, sidaas waxay u baahan yihiin barnaamij oo kala duwan si ay u dajiyaan ama dhoofin files MP4 ay galeen interface ka. Users dooran karaan tiro balaadhan oo ah barnaamijyada online, laakiin waxaa lagu talinayaa in aad doorato Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo file MP4 lagu MP3 format, taas oo markaas loo isticmaali karaa in la soo dajiyo iyo faylka dhoofin. Wondershare Video Converter Ultimate Waa barnaamij caan ah software in waxaa badanaa loo isticmaalaa MP4 in MP3 laga badalay ama MP3 in beddelaad MP4. Marka file ah ayaa loo dhoofiyo sida MP3 dhex dhiiran, waxa ay markaas u bedeli karaan si MP4 la Wondershare Video Converter Ultimate. Talaabooyin lagu la mid ah ayaa laga wada hadlaa ka dib.
2.1 Sidee baad u dhoofinta iyo Faylal ay sida MP3?
Dhoofinta MP3 Faylal ay dhex dhiiran:
1) Marka habka soundtrack ayaa dhammaystiran, waa in aad riix batoonka jaallaha ah ee sare ee interface ka. Taas ayaa ka dhigaysa fursadaha aad heli karto shaqo.
2) Riix File, oo ka soo hoos u soo dhaadhacay menu, dooran 'dhoofinta'. Haddii kale, waxaad sidoo kale riixi kartaa Ctrl + wareejin + E, iyo Hab-la bilaabo dhoofinta ah.
3) A 'Save As-' sanduuqa muuqan doona kuu oggolaadaan in aad badbaadin aad file la magac la doonayo. Hoos u noqon lahaa liiska qaabab uu ka soo xusho.
4) Dooro MP3 ka mid ah liiska of qaabab la sameeyey aad heli karto. Riix Save, oo aad file dhoofin lahaa sida file MP3 ah iyada oo dhiiran.
Keenista faylasha sida MP3 dhex dhiiran:
MP3 files dhici in la Tifaftirayaasha faylasha iyo barnaamijyada software dhiiran uu leeyahay farsamooyin kala duwan si ay u dajiyaan files Tifaftirayaasha iyo uncompressed. Inkasta oo soo degida files uncompressed noqon kartaa habka ballaaran bilowga ah, soo degida MP3 ay tahay mid fudud sida ay dhacdo in ay noqon file a Tifaftirayaasha.
Marka aynu ka soo dhoofsadaan ah file maqal ah ciriiri geliyey mashruuca (kiiskan, MP3) aan sida caadiga ah waxay leeyihiin doorasho u dhexeeya "ammaan" iyo "si dhaqso ah" no - xogta file ee had iyo jeer soo guuriyeen galay mashruuca.
Ujeedooyinka wargelin ah, waxaan ku soo bandhigay habka loo dhoofiyo u files uncompressed.
2.2 Sida loo Isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo MP3 galay MP4?
Tallaabada 1 Download Wondershare Video Converter Ultimate:
Wondershare Video Converter Ultimate Lagala soo bixi karaa 'wondershare.com'. Codsiga waxaa laga soo degsan karaa Windows iyo MAC. Waxaa diinta qaabab video kala duwan, mid ka mid ahna MP4. File ayaa la gediyay loo isticmaali karaa qalabka kala duwan sida Apple, Samsung, iwm Ma jiro waayi maayo tayada iyo gol dheeraad ah faylka la gediyay. Sidoo kale, tani waxay ku badaley shuqullada xawaare ka badan xawaaraha oo dhan converters kale 30 jeer.
Tallaabada 2 Import MP3,
Marka aad soo bixi codsiga, aad dajiyaan karaa MP3 file la doonayo laga habka, ama qalab lagu kaydiyo oo ay ku jiraan qalabka la qaadi karo wax ka baxsan. Converter wuxuu kuu ogol yahay in ay doortaan files meel aad u jeclaystay, taas oo u fududahay hawlaha qaab beddelidda. Haddii uu jiro qaar ka mid ah qalad in aad file loo akhriyo by software ah, fadlan hubi in aad raacday oo dhan tallaabooyinka loo xirxiro si sax ah. Waxaa kale oo lagu talinayaa si loo xaqiijiyo qaab faylka.
Tallaabada 3 Goo / midowdo MP3,
Marka file aad u jeclaystay ayaa si guul leh uploaded in codsiga, kartaa in aad 'gooyay' faylka ku xiran tahay baahidaada. Waxaa jira waqtiyo aad u baahan tahay oo kaliya qaybta gaar ah oo file ah, sida in cajalado muusig, wada hadalka, iyo Cajalado loo maqli karo. Sidoo kale, codsigan kuu ogolaanaya in aad ku milmaan MP3 files kala duwan si ay u abuuraan file hal MP4 aad u isticmaalka. Midoobeen waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo doorasho ku qoran arjiga.
Tallaabada 4 MP3 badalo galay MP4:
Hadda waxaad dooran kartaa ka fursadaha siiyey in loogu badalo kartaa 'gooyay', 'ku biireen', ama 'modified' file qaab MP4 ah. Dabacsanaanta ee diinta kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan faylka dhoofiyo la tiro ka mid ah qalabka. Tani waxay dejineysaa xaddidaadda taas oo ahayd haddii kale la joogo in aad file MP3 hore. Our xawaaraha Converter ka badan ka xawaare ah converters kale 30 jeer, samaynta qaab beddelidda habka ah dhibaatana lacag la'aan ah.
Talaabada 5 dhoofinta MP4:
Marka hawlaha qaab beddelidda la dhamaystiro, waxaa lagugu soo wargalin lahaa in codsiga. Ka dib markii in, in aad wax meel la doonayo on, Computer ka Network, ama wax kasta oo qalab ugu sarreeya ama la qaadi karo kaydinta kale dhoofin karo file MP4 aad. Habka dhoofinta wuxuu hubinayaa diinta file tayo sare leh oo aan laga badinin ka soo tayada asalka ah. Hadda waxaad ka eegi kartaa File MP4 adigoo isticmaalaya guryaha file ama si fudud u ordaya on qalab aad u jeclaystay.
2.3: Wondershare Video Converter Ultimate in Edit files MP4
Users wajahayaan dhibaato marka ay timaado sixiddiisa files MP4 barnaamijka furan il software, dhiiran. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxaa la samayn karaa si sahlan haddii mid ka mid downloads Wondershare Video Converter Ultimate. Sida lagu video Converter wanaajiyey, iyo mid ka mid ah ugu wanaagsan ee suuqa hadda, waxa ay bixisaa user qalab tafatirka taas oo uu leeyahay interface sahlan in la isticmaalo oo ay la socdaan qaababka kala duwan ee ka yeela sixiddiisa fudud ah. Isticmaalayaasha ayaa lagula talinayaa in ay si toos ah u isticmaali Wondershare Video Converter Ultimate sida ay iyaga badbaadiyay markii si kale looga baahan yahay dhoofinta iyo soo degida MP3 files ka dhiiran. Tayada sidoo kale walwal ah ma markii Wondershare Video Converter Ultimate isticmaalaa.
Waxaa jira marar file MP4 ah aan la gelin karo in Windows Movie abuuray ujeedooyin tafatirka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in Windows Media Player 11 aqoonsan oo u ciyaara MPEG-4, laakiin Kan sameeyey Windows Movie aan qalabaysan in ay sidaas oo kale sameeyaan. Waxa la yaab leh, MP4 lama jaanqaadi Windows Kan sameeyey Movie oo haddii kale taageertaa .WMV, .ASF, .AVI, .MPE, .MPEG, .MLV, .MP2, .MPV2, oo ay la socdaan .WMA.
Habka caadiga ah oo aad ku file MP4 si aad u Windows Movie abuuray waa inuu badalo qaab file in noqon kartaa mid taageero Windows Movie abuuray ah. Waayo, kanu ujeedada, oo la gediyay hufan loo baahan yahay in wax looga qabto kartaa baahida oo dhan. Wondershare Video Converter Ultimate, Mid ka mid ah converters ugu dhaqsiyaha badan ee suuqa oo garaacday tartanka by xawaare 30 jeer ka dhakhsi badan Converter kasta oo kale, waa mid ka mid ah converters loo isticmaalo si ay u gudbiyaan file MP4 aad qaab ka socon kara.
Halkan, waxaan qaadi qaar ka mid ah la is weydiiyo su'aalo marka ay dadku ka hadlayaan Wondershare Video Converter Ultimate oo isticmaalaya isku mid u ah files MP4 tafatirka ee Windows Movie abuuray.
Q1: tayada ma heli saameysey mar kasta oo aan u isticmaalno barnaamij oo dheeraad ah si loogu badalo faylka?
A1: Maya, ma jirto waayi maayo tayo leh haddii isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo file MP4 aad.
Q2: walwalsan khasaaro xogta ama wax cayayaanka kale ee file tahay in aan?
A2: No, la Wondershare Video Converter Ultimate, khasaaraha xogta ayaa eber jaaniska.
Q3: doonaa iyadoo la isticmaalayo Wondershare Video Converter Ultimate caawin faylka qaab la doonayo ii heli karaa?
A3: Haa, la Wondershare Video Converter Ultimate, aad u bedeli karaan file MP4 aad galay tiro ka mid ah qaabab kala duwan, mid kasta oo la jaan qaada Windows Movie abuuray. Interface waxay leedahay fursado aad dooran kartaa qaabka la doonayo oo ay bilawdo qaab beddelidda.
Q4: hawlaha qaab beddelidda noqon doonaa daalin oo dheer?
A4: No, WVCU aad bixisaa raaxada ah si loogu badalo file MP4 aad galay wmv qaab kasta oo socon sida ugu dhaqsaha badan.
Q5: Halkee ayaan ka Wondershare Video Converter Ultimate soo bixi kartaa?
J5: link ayaa waxaa laga heli karaa bogga guriga, iyo software ah ayaa diyaar u ah Operating Systems kala duwan.
Q6: Waxaan ka dhigi karaa uga faaidaysan tafatir dheeraad ah WVCU?
A6: Haa, WVCU aad bixisaa xarunta tafatirka la fudud ah si ay u isticmaalaan interface in loo isticmaali karo in lagu daro saameynta kala duwan iyo sida diirada si aad video.
> Resource > MP4 > dhiiran, dhoofinta iyo MP4